आठौँ रङको लाछा - प्रतिविम्ब.com %
कोमल सुब्बा ,टिस्टा भेली, दार्जीलिङ।
सामान बोकेर ओहोर-दोहोर गर्दा बाजे हाम्रै घरछेउ भएर हिँड्नेगर्थ्यो। मलाई मिठाई दिएर जान्थ्यो। कोहीबेला म्वाईँ पनि खान्थ्यो। कोहीबेला “पोक्ची केटी कति किलो छ हँ? ” भन्दै मलाई बोकेर च्याप्पै छातीमा टँसाउँथ्यो।
“ए बिहानी, सिद्रा, सुकुटी राख्ने हो? पोते, तिलहरी, लाछाहरू पनि छ रङ्गी बिरङ्गी।”
लाछा भनेपछि हुरुक्कै हुने मलाई लाछा भन्नेसाथ हेरूँहेरूँ लागिहाल्यो। म खाँदाखाँदै थालको भात आधै छोड़ेर बाहिर निस्केँ। बाहिर आँगनमा एकजना मान्छे रहेछ। चाउरिएको अनुहार, ठाउँ-ठाउँमा हिउँ परेजस्तो फुसफुस केश फुलेको बुढो मान्छे। ढाडमा ठूलो झोला अनि हातमा कालो-कालो पोका बोकेको थियो उसले। मलाई देखेर ङिचिक्क हाँस्यो।
भित्रबाट आमा पनि बाहिर निस्की र भनी- “यसले खाँदाखादै भात पनि छोडेर आएछ। ”
म हाँस्दै उभिरहेँ। आमाले त्यसपछि त्यो बुढो मान्छेलाई पिरा दिएर बस्न लगाइन्। सुकुटी र सिन्की तौली मागेर राखी, तर मैले जिद्दी गर्दा पनि लाछा किनिदिन मानिन। म अँध्यारो मुख लगाएर त्यहीँ बसिरहेँ।
त्यो बाजे हाम्रो गाउँको ठुटे तुम्बासँग बस्नथालेको थियो। दुवैजना एकै दँवले भएकाले खूब मिल्थे। बाजे दिनभरि सामानहरू बेच्नलाई कहाँ-कहाँ पुग्थ्यो, तर कतै बास भने बस्थेन, रात परेपनि ठुटे तुम्बाकहाँ नै आइपुग्नेगर्थ्यो। बाजे आएपछि ठुटे तुम्बाको हर्क त्यसै बढ्थ्यो। मातेर ऊ गाउँ नै थर्काउनेगरी सधैं गाउने भजन गाउनेगर्थ्यो-
आज तुम्बाको घरमा हाटमा झैं मान्छेहरू थुप्रिएका थिए। थुप्रिनेहरू सबैले बाजेलाई केही न केही अवश्यै ल्याइमागेका हुनुपर्छ। बाजे आफ्नो अघिपट्टि सबैको मागअनुसारको सामानहरू फिँजाएर बसेको थियो। म पनि पुगेर उभिएँ। अहा! मेरो त आँखै तिरीमिरी भयो। टिलिक्क टल्कने ताराहरू जडित लाछा देखेर मेरो लोभको सीमा नै रहेन। पहेंलो, रातो, गुलाबी ताराहरू भएका लाछाहरू मेरा आँखा वरिपरि चम्किला भएर चम्किरहेका थिए।
मान्छेहरू आफूले ल्याइमागेका सामानहरू छानेर हात-हातमा उठाउँदै आ-आफ्ना घरतिर लागिसकेका थिए। म बाजेको छेउमा गएर बसेँ र ती रङ्गी-बिरङ्गी लाछाहरू खेलाउन थालेँ। आफ्नो कपालमा लगाएर मक्ख पर्नथालेँ।
बाजेले त्यो समय मेरो ढाड आफ्नो खस्रो हातले दल्दै भन्यो- “हन के खान्छस् हँ तँ? कम्ता मोटी छैनस् त।”
त्यतिनैबेला आमा आएर भनी- “हन यसले बाजेको लाछा बिगारिदिन्छ होला। हिँड् घरमा।” भनेर मलाई तान्दै घरतिर लगी।
आमाको कुरो सुनेर मैले लाडे पल्टिँदै भनेँ- “कहिले किनिदिने? साँच्चि नै किनिदिन्छौ?”
म आमालाई नभनी माथि ठुटे तुम्बाको घरमा पुगेँ र आँगनमा ठिङ्ग उभिएर यताउता हेरेँ। अहँ, बाजे कहीँपनि छैन। ठुटे तुम्बा चुल्हाको छेउमा बसिरहेको थियो र झोक्रिएको अवस्थामा बिँडीको धुवाँ उडाउँदै बसिरहेको थियो।
तुम्माले दालमा फिर्के लगाउँदै भनी- “कस्तो त त्यो बुहारी पनि? त्यसरी एक्लै छोडेर जानुहुन्थेन नि।”
तुम्बाले सिग्रेटको सर्को तान्दै भन्यो- “कहाँ, एकैछिनको कुरो त अरे। त्यो बुहारीले पनि विश्वासै गरेर ”एस्तरलाई एकछिन हेरिदिँदै गर्नु है“ भनेर मिलिक्कै मात्र भएको थिएछ। आउँदा त …………।”
मैले तुम्बाको हातैबाट लाछा खोसेर भनेँ- “आइँसाला……मेरो लाछा।”
त्यसबखत् पनि मैले तर तुम्बा बोलेको मधुरो आवाज सुनिरहेकी थिएँ। उसले भनिरहेको थियो- “बुढोले भाग्दा सबै सामानहरू छोडेर गएछ। यसले पनि अस्तिदेखि लाछा मनपराएको, त्यै भएर ल्याइदिएको नि।”
म भने लाछा पाएको खुशीले गदगद भएर बर्बराइरहेकी थिएँ- “आइँसाला…..मेरो लाछा। भोलि त एस्तरलाई देखाउँछु।”
सुवास श्रेष्ठका गजलहरू
साहित्यकार नरबहादुर दाहाललाई फिक्कलबाट पहिलो ‘नर-रत्न स्रष्टा सम्मान’प्रदान
मासिकरूपमा रङ्गीत रिभ्यूज सम्पन्न गरिने
सरिता समदर्शीका गजलहरू
केराको बोट अनि बाल-सखा
6 वटा चियाबारीहरूलाई लिएर मालिक पक्ष र डीटीडीपीएलयुमाझ सम्झौता सभा
डीआई फण्ड अनि कालेबुङ होम्स अधिनस्थ क्षेत्रवासीहरू पक्षमै उभियो गोजमुमो